फोटो पत्ता लगाउनुस् – MySansar
Category: फोटो पत्ता लगाउनुस्
क-कसले मिलाउनु भयो त यो फोटो कहाँको भनेर?
Posted on April 12, 2015 April 13, 2015 by Salokya
गएको साता सोधिएको यो ठाउँ कहाँको भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफ धेरैले मिलाए। कसैले भने यसलाई तीनकुने र माइतीघर भने। कसैले न्यौपाने टावर र इन्द्रेणी कम्प्लेक्स भने। कसैले नारायणगढ बजार पनि भन्न भ्याए। न्युरोड भन्नेहरु पनि देखिए। त्रिपुरेश्वर पनि भनियो। खासमा यो कहाँको दृश्य थियो त? भित्रको फोटो हेर्नुस् र फोटोमा देखिएका राता गोलोमा माउसको कर्सर… Continue reading
पत्ता लगाउनुस् कहाँको होला यो फोटो
Posted on April 10, 2015 April 10, 2015 by Salokya
माइसंसारमा फोटो पत्ता लगाउनुस् स्तम्भलाई तपाईँ पाठकहरुले निकै रुचाउनु भएको छ। तपाईँहरुको सक्रिय सहभागिताले नै नयाँ नयाँ ठाउँका फोटो राख्न अभिप्रेरित भइरहेका छौँ। केही हप्ताको अन्तरालपछि आज फेरि नयाँ दुई वटा फोटो लिएर आएका छौँ। तपाईँले यसलाई ध्यान दिएर हेरी काठमाडौँको ठ्याक्कै कुन ठाउँको हो, पत्ता लगाउनु पर्नेछ। आफ्ना अनुमानहरु तल कमेन्टमा लेख्दै गर्नुहोला। जवाफ… Continue reading
पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कहाँको हो यो फोटो?
Posted on March 22, 2015 March 22, 2015 by Salokya
गएको साताको फोटो कहाँको पत्ता लगाउनुसमा धेरै सहभागी भए। अधिका‍ंशले ठ्याक्कै मिलाए पनि। यो पटक भने अलि फरक फोटो। खासमा यो फोटोको आधा रुपमात्रै यहाँ देखाइएको छ। यति मात्रै हेरेर तपाईँले यो कहाँको फोटो पत्ता लगाउन सक्नुभयो भने मानौँला। नभए पनि अनुमानसम्म त लगाउनुस्। यसको जवाफ २४ घण्टापछि अर्थात् सोमबार राति ११ बजे दिइनेछ। हेरौँ… Continue reading